မိုးဟေကိုနဲ့ အောန်ဆိုင်းကို သဘောကျပါတယ် ဆိုတဲ့ မေရည်ဆု - Yangon Media Group
မိုးဟေကိုနဲ့ အောန်ဆိုင်းကို သဘောကျပါတယ် ဆိုတဲ့ မေရည်ဆု
Photo – Aung Zaw(Love Space), Make up – Lin Lin (Make up Artist), Jewellery – OK Jewellery
Q. ဒီနေ့ Cover ရိုက်ကူးရတဲ့ စိတ်ခံစားချက်….
A. စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ကြည် နူးပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တွေမှာ ကြည့်ရင် လွယ်တယ်လို့ခံစားရပေ မယ့် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့် တဲ့အခါမှာ အားလုံးက အင်အား တွေ ထည့်ရပါတယ်။ အနုပညာရှင် တွေအပြင် ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ၊ Make up Artist နဲ့ Stylist တွေကို လေးစားမိပါတယ်။
Q. အဖြူရောင်ဝတ်စုံနှစ်စုံကို ရွေးချယ်ဝတ်ဖြစ်သွားတာက…
A. အဖြူရောင်က ဖြူစင် တယ်။ အဖြူရောင်လေးဝတ်ထားရင် ရှင်းလင်းကြည်လင်ပြတ်သားတယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဖြူရောင်ကို ရွေးဝတ်ဖြစ်တာပါ။
Q. ဘယ်လိုဖက်ရှင်ပုံစံကို ကြိုက်လဲ။
A. ဖက်ရှင်ဆိုတာ သူ့ Trend သူ၊ သူ့နှစ်နဲ့သူ ရှိသွားမှာပါ။ အဓိက ကတော့ မေရည်က တစ်ယောက် ချင်းစီရဲ့ Style လေးတွေကို ကြည့် ဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့စတိုင်လ်လေးတွေ က ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ထိမိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ လိုက်၊ မလိုက် ဝတ်ကြည့် တယ်။ ဝတ်ကြည့်မိတဲ့အခါ အဲဒီထဲ မှာ ပျော်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Trend နဲ့ Style ကို ရွေးချယ်ဖြစ်သွားတယ်။
Q. Photo Model လုပ်ဖို့ ဝါ သနာပါတာလား။
A. ဟုတ် Photo Model လုပ်ဖို့ ဝါသနာပါပါတယ်။ ဝါသနာ သပ်သပ်မဟုတ်ဘူး။ အလှပုံရိုက် တာ မဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျတိတိကျ ကျ စည်းကမ်းရှိပြီး အနုပညာဆန်တဲ့ ဓာတ်ပုံမျိုးကို ရိုက်ချင်တယ်။
Q. မြန်မာပြည်က မော်ဒယ်လ် တွေထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုကြိုက်လဲ။
A. မိုးဟေကိုနဲ့ အောန်ဆိုင်းကို သဘောကျပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Pose တွေ၊ သူတို့ရဲ့လမ်းလျှောက်မှုတွေ၊ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အားအင်တစ်ခုလို့ ခံစားရ တယ်။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်လည်း ပြည့်စုံအောင် တိုးတက် ချင်တဲ့စိတ်တွေ မွေးဖွားစေတယ်။
Q. အခုချိန်မှာ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက် ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူနဲ့ရိုက်ချင် လဲ။
A. မိုးဟေကိုနဲ့ ရိုက်ချင်ပါ တယ်ရှင့်။
သီလ၀ါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ တစ်ဘီလီယံပြည့်ပြီ ၊ ဘီလီယံ ၄
E coli ပိုးကတော့ နေရာ တိုင်းမှာရှိတာပါ ဆိုတဲ့ နန်းမွေစံ
ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း သားနှင့် သမီးများကို ပခုံးပေါ်တွင် တင်ကာ အားလပ်ရက် ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ခဲ့
မန္တလေးမြို့ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် လူတစ်ဦး အနုကြမ်းဝင်စီး၊ ရွှေနှင့် ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်း ယူဆောင
အင်းလေးဖောင်တော်ဦး မြတ်စွာဘုရားများ မူလ ကိန်းဝပ် စံပယ်တော်မူသည့် ရတနာစံကျောင်းတော်ကြီးေ?
ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ ရောင်